Maalinta: Abriil 15, 2019
Tareenka tareenka ee Burdurlular ayaa dib uga soo noqonaya xarunta tareenka
Deganeyaasha Burdur ee sugaya tareenka rakaabka, oo leh sharraxaadihii ugu dambeeyay, Xarunta Dhismaha Waddada Burdur waxaa loo rari doonaa warshadaha abaabulay, jidadka tareenka illaa iyo qeybta warshadaha abaabulay ee burburay, xarunta tareenka ee hadda la shaaciyey in la xiri doono. Tani waa dadka reer Burdur ee sugaya tareenka [More ...]
Daryeelka Jardiinooyinka iyo Beeraha ee Tareenka Saldhigga ah iyo Hareeraheeda
Saldhigga Ankara iyo Nawaaxigeeda, Matxafka Tcdd Malıköy, Kayaş iyo Behiçbey Basin Dayactirka iyo Iskuxirka Beeraha iyo Xadiiqadaha Sida Natiijo Ahaaneed Maareeyaha Hay'adda Tareennada Waddanka Turkiga (TCDD) 2019 / 131226 GCC lambar [More ...]
Kor-u-dhaafka, Kor-u-dhaafka iyo Culvert ee Konya-ga YHT Khadka Kala-bixinta
Kordhinta, Jid-goynta iyo Dayactirka Dayactirka ee Mashruuca dayactirka tareenka ee loo yaqaan 'YHT 83 Railway Direction Director Tender Result 2019 / 138585 GCC' wuxuu xadidayaa qiimaha 1.376.755,03 TL iyo qiimaha ugu sareeya ee 2.055.039,66 TL ee Agaasinka Tareenka Waddanka Turkiga (TCDD) [More ...]
17 ee Maalmaha Ganacsiga ee Turkiga iyo Jarmalka waxaa martigaliyay Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha Bursa (BTSO). Kulankan ayaa waxaa ka soo qeyb galay ganacsatada Turkiga iyo Jarmalka iyo sidoo kale wakiilo ka kala socda hay'adaha maalgashiga iyo xarumaha dowliga ah. [More ...]
Mudada Dakhliga Bixinta ee Garoonka Diyaaradaha ee Istanbul
Gawaarida dhigashada garoonka diyaaradaha ee Istanbul ayaa noqon doonta mid mas'uul ah laga bilaabo maanta. 29 Kadib furitaankii rasmiga ahaa ee Oktoobar, hawlwadeenka İGA, oo aan lacag ku darin baarkinka, wuxuu ku dhawaaqay in baarkinka gawaarida uu noqon doono bilaash illaa Abriil. Laga bilaabo maanta ilaa muddada lacagta la bixiyo [More ...]
Sanad ayaa laga joogaa markii shilka tareenka uu ka dhacay Çorlu. Si kastaba ha noqotee, jidadka tareenka ee gobolka Thrace wali waa khatar. La'aanta daahyada oo sugaya wadiiqooyinka kuwa seexanaya ee ku yaal degmada Muratlı ee Tekirdağ cusub [More ...]
Tababarka La-Xiriirinta Bulshada iyo Tacliinta Horumarinta ee Gaziantep
Marka la eego baaxadda Tababbarka Iskaashiga Bulshada, Dhiirigelinta, Hirgelinta iyo Mashruuca Horumarineed ee ay soo saartay Wasaaradda Ganacsiga, Agaasinka guud ee Ganacsatada, farshaxanada iyo iskaashatooyinka, kor u qaadista wacyiga ku saabsan nooca iskaashatada bulshada, taageerida iyo horumarinta [More ...]
Sidee loo geyn karaa Madaarka Istanbul ee gaadiidka dadweynaha?
Gaadiidka garoonka diyaaradaha ee Istanbul waxaa bixin kara basaska IETT iyo Khadadka HAVAIST. IETT's H-1, H-2, H-3, H-4 iyo Khadadka HAVAIST ee IST-1, İST-2, İST-3, İST-4, İST-5, İST-6 , İST7, İST-8, İST-9, [More ...]
Eurasia Tunnel Waxay bixisaa 23 Million Saacad Waqtiga Kaydinta Sanadkiiba
Mehmet Cahit Turhan, Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha, dık Eurasian Tunnel, waxaan gaarnay 23 milyan oo saacadood oo kaydinta waqtiga ah, 30 kun oo tan oo kaydinta shidaalka ah, iyo 18 kun oo tan oo dhimis ah oo kaarbo oksaydhka ah la sii daynayo. [More ...]
Mashruuca Sümela Ropeway ee Mashruuca Agenda ee Madaxweynaha Zorluoglu
Duqa magaalada Trabzon Murat Zorluoğlu, dhinaca kale isagoo aqbalaya hambalyo, isbedelada maaraynta iyo hadalada kooban ee howsha socda wuxuu bilaabay inuu ka shaqeeyo mashruucyada. Mashaariicda la dhaqan gelin doono inta lagu gudajiray muddadiisa, [More ...]
Elçin Demiröz oo ka socda Oda TV, oo cadeeyay in qofna wax ka qorin madaarka Istanbul, kaasoo guul weyn ka soo hoyay warbaahinta kana hadlay dhismihiisa iyo furitaankiisaba, wuxuu qoray dib u soo celinta iyo dhismooyinka garoonka aadka looga dooday. 29 Oktoobar [More ...]
Ulusoy Elektrik wuxuu fuliyay wareejinta hantida la xiriirta howlaha nuuca hagista catenary Nidaamka Tareenka Ulusoy ee qiimaha TL 2,97 milyan. Macluumaadka soo socda waxaa lasiiyay Platform ይፋ Platform (KAP) Shirkadda: [More ...]
Codsiyada loo baahan yahay in loo sameeyo İŞKUR inta lagu gudajiro howlaha qoritaanka ee 356 ee laga dhex shaqeynayo gudaha TC State Railways (TCDD) ayaa dhammaanaya illaa maanta. Sidee loo dalbadaa shaqaa qorista shaqaalaha ISKUR TCDD? KUR TCDD [More ...]
Eurasia Rail ee Fairfire Fair KARDEMIR Wind Esti